Mumiriri weMbizo muparamende, VaSettlement Chikwinya ndemumwe wevadare vasungwa zvakare.
Dzimwe nhengo mbiri dzeMDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa dzakabvisiswa mari yechibatiso pane imwe mhosva yadziri kupomerwa dzinonzi dzasungwa zvakare neChishanu apo dzaenda kumapurisa kunozviratidza sezvakatarwa nematare edzimhosva apo dziri kutongwa dzichibva kumba.
Mumiriri weMbizo mudare reparamende, VaSettlement Chikwinya, pamwe nemumiriri weRedcliffe, VaLloyd Mukapiko, vanonzi vasungwa vachipomerwa mhosva isati yazivikanwa.
Gweta raVaChikwinya, VaBrian Dube, vatenda kuti VaChikwinya vasungwa.
Vaviri ava pamwechete nedzimwe nhengo dzeparamende dzebato reMDC kusanganisira mumiriri weMkoba, VaAmos Chibaya nemumiriri weChiwundura, VaLivingstone Chimina, vakasungwa mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga, iyo vakazopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso.
VaChibaya vakasungwawo zvakare musi waKukadzi 01, 2019 vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yaVaEmmerson Mnangagwa.
Asi munyori mukuru muMDC, VaDouglas Mwonzora, vanoti zviri kuramba zvichiitika zvekusunga nhengo dzavo inzira yehurumende yekuda kushungurudza bato ravo.
Zvichakadaro, masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti reAmnesty International, reHuman Rights Watch, neOXFAM International, anyorera mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa tsamba achivakurudzira kuti vatore matanho akasimba ekugadzirisa zvinhu munyika munyaya dzekodzero dzevanhu.
Masangano aya anoti ari kunyanyoshushikana nekuramba hurumende ichishungurudza vanorwira kodzero, vemasangano akazvimirira, vashandi, vanopikisa, pamwe nevanhuwo zvavo.
Masangano aya anotiwo ari kuzviziva kuti madzimai nevanasikana vanonzi vakabatwa chibharo nemauto pamwe nemapurisa.
Anoti kumbovharwa kwemasaisai nehurumende munguva yekusaenda kumabasa kwevanhu kwakakanganisa kufambiswa kwemashoko munyika yose, uyewo kuti kwakatadzisa vanhu kushandisa mari dzavo dzeive mumafoni kuti vatenge zvekudya pamwe nekubhadhara zvipatara munguva yekuomerwa.
Masangano aya anoti ari kukurudzira kuti hurumende yaVaMnangagwa iremekedze kodzero dzevanhu, uye kuti vanhu vabvumidzwe kutaura vakasununguka.
Masangano eAmnesty International, Huma Rights Watch, neOXFAM ari kukurudzira kuti mauto pamwe nemapoka evechidiki kuti vasiyane netsika yekushungurudza vanhu.
VaMnangagwa vari kukurudzirwawo kuti vaferefete zvisina tsvete nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu idzi, uye ani nani zvake anenge afungidzirwa kuti ane chekuita nenyaya idzi amiswe pamberi pematare.
Masangano aya ari kukurudzirawo kuti madzimai akashungurudzwa akwanise kumhang'ara nyaya dzavo kumapurisa, uye kuti vakwanise kuwana rubatsiro rwekunorapwa kuzvipatara.